Wararka - Mashiinka Plansifter Warshada Daqiiqda / Plansifter-ka Bariiska wax lagu shiilo
Qorshaha FSG ee taxanaha ah ayaa si weyn loogu dabaqay warshadda daqiiqda casriga ah iyo warshado shiida bariiska. Inta badan loo isticmaalo shaandhaynta qamadiga la shiiday iyo walxaha dhexe, waxa kale oo loo isticmaali karaa shaandhaynta hubinta daqiiqda.Naqshadaynta shaandhaynta kala duwan waxay u adeegtaa marinnada shaandhaynta ee kala duwan iyo agabka dhexe ee kala duwan.
- FSG taxanaha Plansifter waxaa wada matoor kaas oo lagu rakibay gudaha fareemka weyn oo ka-hortagga miisaan culus.Mashiin kastaa wuxuu leeyahay 4, 6, ama 8 qaybood oo shaandhooyin gudaha ah.Qalab kala duwan ayaa ku qulqula qaybo kala duwan dariiqa iyaga u gaar ah.Marka loo eego naqshadaha shakhsi ahaaneed ee agabyada kala duwan, shaandhooyinku waxay kala shaandheeyaan walxo granular oo kala duwan marinnada kala duwan ee mashiinnada burka marka mashiinka oo dhan uu socdo.
- Sieve frame size: 640x640mm, 740mmx740mm, ama loo sameeyay si waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
- Qaabka saxanka birta ah ee la riixay.Darbiyada santuuqa gudaha ah oo ay ka buuxaan bir aan lahayn.Miisaanka la hagaajin karo oo lagu rakibay SKF (Swedn) rullaluistuyaal laba jeer ah oo gaar ah iyo nooca is toosinta.
- Fiimyada shaandhada waxaa lagu sameeyaa alwaax dibadda laga keeno oo dahaarka gudaha iyo dibadda ku leh balaastig melamine ah, laga saari karo, la beddeli karo.Fiimyada shaandhada waxay ku qalabaysan yihiin saxaarad bir ah oo aan lahayn.Qayb kasta oo dhan waxa lagu xidhaa iyada oo la isticmaalayo bir bir ah iyo boolal micrometric ah oo ka imanaya xagga sare.Way fududahay oo degdegaysaa in la beddelo nidaamka shaandhaynta.
- Meelaha laga siidaayo planifter, oo ay ku jiraan koofiyadaha balaastigga ah ee madow ee ku dhex jira baaxadda cabbirka cuf-isjiidadka.
- Alaabta shaandhaynta si ay u noqdaan mesh SEFAR.
- Shaandhooyin cusub oo Nova ah ayaa sidoo kale la heli karaa, shaandho gudaha aluminium ah oo loogu talagalay baahi badan oo nadaafadeed.
Plansifter Sieve Loo Isticmaalay Warshada Hadhuudhka Hadhuudhka
- Si balaadhan loogu dabaqay warshado burka casriga ah, warshada hadhuudhka iyo shiida bariiska.
Inta badan loo isticmaalo shaandhaynta sarreenka la shiiday iyo shaandhaynta walxaha dhexe, waxa kale oo loo isticmaali karaa shaandhaynta hubinta burka.
- Naqshad shaandhayn kala duwan ayaa u adeegta marinnada shaandhaynta ee kala duwan iyo agabka dhexe ee kala duwan.